The wxpydict Open Source Project on Open Hub
wxPyDictDictionary Lookup Program, based on wxWidgets, wxPython, Python, sqlite3, cburglish, and Myanmar Text Tools from Burglish Systems, currently mainly support for Myanmar Language based on Zawgyi Encoding.
Download All-in-One InstallerDownload wxPyDict All-in-One Installer with English->Myanmar(ornagai), Myanmar->English(saing dictionary), and Myanmar Villages Directory(from Ko Nyi Lynn Seck) included
Features (Quick)+ မြန်မာလိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုရော အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေနိုင်သည်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ (Ornagai), မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် (စိုင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်), ကိုညီလင်းဆက် ပြုစုထားသော မြန်မာကျေးရွာနာမည်များအဘိဓာန် ကို အသုံးပြုထားသည်။
+ မြန်မာစာ၏ ဝဏ္ဏဖြတ်စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေခြင်းကို ပိုမိုတိကျအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဥပမာ - ကံ ကိုရှာစဉ်တွင် ကြံ ကို ရှာဖွေမိခြင်းမရှိစေရ။
+ စာလုံးပေါင်း အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိပြင်ပေးနိုင်သော အလိုအလျှောက် စစ်စတမ် တစ်ခုပါရှိသည်။ ဥပမာ - ကခြော်ကခြွတ် လို့ရိုက်ပြီး Enter ကီးသုံးပေးပါက အလိုအလျောက် ကချော်ကချွတ် သို့ပြောင်းပေးသွားမည်။
Features (Detailed and more technical)+ custom dictionary ဖိုင်တွေကို tsv (tabs seperated value) format အနေနဲ့ ထည့်ပေးနိုင်သည်။ (wxPyDict.ini file ကို edit လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်)
+ built-in dictionary builder (custom dictionary ထည့်ပြီးလျှင် Update->Rebuild Database ပြန်လုပ်ပေးရမည်) (if you have sqlite3.exe in same folder, dictionary building will get around 30% faster speed)
+ custom dictionary ဖိုင် သည် encoding utf8 သို့ utf16 ကြိုက်တာဖြစ်နိုင်သည်။
+ dictionary data should be in Zawgyi 2008 or Zawgyi 2009 Encoding, It will store in DB as, my encoding ဖြင့် sqlite3 အနေဖြင့် wxPyDict.db ဖိုင်တွင် သိမ်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
+ support reverse lookup, အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန် ကို မြန်မာစာဖြင့်ပြန်ရှာနိုင်သည်။ (output is not perfect but still usable feature)
+ support syllable breaker real-time, ကံ ကိုရှာတဲ့ အချိန်မှာ ကြံ တွေဘာတွေမပါလာဘူး။
+ built-in Normalization of Zawgyi to Zawgyi 2009, က--ိ-ု ပဲဖြစ်ဖြစ် က--ု--ိ အတူတူပါပဲ၊ မှု ပဲရိုက်ရိုက် မှု ပဲ ရိုက်ရိုက် မှု ပဲရိုက်ရိုက်အတူတူပါပဲ
+ built-in spell autocorrection for Myanmar Language, for eg, if you type "ကခြော်ကခြွတ်" it will automatically correct to "ကချော်ကချွတ်" (need spell dictionary from thanlwinsoft)
Download Separate Binaries (Don't need if All-in-One Installer is used)Main program only wxPyDict.7z + If you don't have dependencies files, like python25.dll, wx*28*.dll, MSVCR7.dll, and MSVCP7.dll, Download all files from download list
Installations of Separate Binaries (Don't need if All-in-One Installer is used)There is no installations needs, just need to run wxPyDict.exe file, but make sure you already have python25.dll, wx*28*.dll, MSVCR7.dll, MSVCP7.dll
Spell dictionary (my_MM.dic) (Don't need if All-in-One Installer is used)မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းစစ်ပေးရန် အတွက် my-MMDict.oxt thanlwinsoft (Ko Wunna Ko Ko & Keith Stribley) မှ ထုတ်ထားသော openoffice အတွက်သုံးထားသော spell dictionary ကို 7z စတာတို့ဖြင့် my_MM.dic ကို extract လုပ်ပြီး wxPyDict.exe နှင့် နေရာအတူတူတွင် ထားပေးရန်လိုအပ်။
Prebuilt Dictionaries (Don't need if All-in-One Installer is used)အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ornagai dict folder - from mysteryzillion (Saturngod)
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် saing dictionary.7z - from Saing Khan Tun
ကိုညီလင်းဆက် ပြုစုထားသော မြန်မာကျေးရွာနာမည်များအဘိဓာန်
Dictionary File building (For Dictionary Creators & Advanced Users)There is built-in dictionary builder, from Menu-Update->Rebuild Database, will load all dictionaries from wxPyDict.ini
for eg., here is sample of wxPyDict.ini
[/DICTS]ornagai.tsv is tsv (tabs separated value) format file,
1 - means content searchable, for reverse lookup feature,0is not reverse searchable (default)
File Details (For some people, who want to know which files are doing what)wxPyDict.exe သည် အဓိက အလုပ်လုပ်မည့် ဖိုင်ဖြစ်သည်။ အင်စတော လုပ်ပြီးခါစ run လျှင် wxPyDict.db ကို တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် စက္ကန့် အနည်းငယ် ကြာမည်ဖြစ်သည်။ (အဘိဓာန်အရွယ်အစားနဲ့ အသုံးပြုမည့်စက်ပေါ်မူတည်သည်။)
wxPyDict.ini သည် custom dictionary ထပ်ထည့်နိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ wxPyDict.ini မရှိနေပါက အလိုအလျောက် create လုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
wxPyDict.db သည် sqlite3 db ဖြစ်ပြီး database build လုပ်သည့်အချိန်တွင် tsv format ဖိုင်များမှ ဖတ်ပြီး သိမ်းယူသွားမည်။
wxPyDict.spell သည် spell dictionary (my_MM.dic) မှ ဒေတာကို ဆွဲထုတ်ပြီး ပိုင်သွန်က နားလည်သော format ဖြင့် သိမ်းထားသောဖိုင်ဖြစ်သည်။ (loading မြန်ရန်အတွက်)
AuthorwxPyDict Demo is done by Soe Min (Mark) - soemin AT my HYPHEN MM DOT org
ChargesThis Program is Free of Charges, If you paid for it, getarefund!!!
LicenseAnd It is by My Special License
Not Allowed to use for Commercial or Ads related things Not Allowed for Redistributions (Program must be get from my sites or from me directly) Not Allowed from Embeding / Linking / Calling / Any Kinds of Usage from Another programs Not Allowed for Modification / Reverse Engineering of the Program for any reason Above License Statements may change anytime for any reason
WarningsThis is NOT Opensource application, but it is Free as in Beer.
googlecode need to setalicense, so I set it as GPL, its justadummy, nobody is allowed to claim my proprietary things to those license
burglish burmese c cplusplus dictionary english myanmar python spelling unicode wxpython wxwdigets zawgyi
InaNutshell, wxpydict...
Become the first manager for wxpydict